ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် UEC ဥက္ကဌ ဦးသိန်းစိုးမှ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့်တွေဆုံစဉ် (ဓာတ်ပုံ - Reuters)
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် UEC က နေပြည်တော်အခြေစိုက် နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို ငွေကြေးနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းတွေနဲ့ ပါတီအင်အား တွေနဲ့ပတ်သတ် လို့ စစ်ဆေးမှု တွေစတင်ပြုလုပ်နေပါတယ်။ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP ပါတီ၊ ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ UBP တို့အပါအဝင် နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ စစ်ဆေးခံနေရတဲ့အကြောင်း ရန်ကုန်ကလာတဲ့သတင်းကို မဆုမွန် ကတင်ပြပါမယ်။
တပ်မတော်အရာရှိဟောင်းတွေနဲ့ အဓိကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး USDP ပါတီ၊ သူရဦးရွှေမန်းတည်ထောင်ထားတဲ့ ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင် UBP ပါတီ၊ အမျိုးသားညီညွတ်သော ဒီမိုကရက်တစ္ပါတီ NUD၊ အမျိုးသားနိုင်ငံရေး ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ DNP တို့ကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် က စစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီတြေရဲ့ ရန်ပုံငွေ၊၊ ငွေကြေးနဲ့ ပစ္စည်းစာရင်းတွေကို စစ်ဆေးမယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အသိပေးတဲ့စာထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသိပေးစာထဲမှာ မပါတဲ့ ပါတီအင်အား တွေနဲ့ပတ်သတ်လို့ပါ စစ်ဆေးမှုတွေရှိတယ်လို့ စစ်ဆေးခံရတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့ အမည်မဖော်လိုသူ ပါတီထိပ်ပိုင်းတယောက်က ဗွီအိုအေကိုပြောပါတယ်။
"UEC က သူကဦးဆောင်တဲ့နေရာမှာနေပြီးတော့ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်စစ်ဖို့အတွက် ကို ပြည်တဲရေးရယ် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးရယ်၊ ဘဏ္ဍာအခွန်ဝန်ကြီးဌာနရယ်၊ အဲ ၃ခုကကိုယ်စားလှယ်ခေါ်စစ်တာပါ။ ပါတီရဲ့ပြေစာတခုချင်းဆီအလိုက်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးကလူတွေက စစ်တယ်။ ဘဏ်ငွေစာရင်းရှိရင်လည်းစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဌာနကစစ်တယ်။ ပြည်တဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ပါတီဝင်စာရင်းပေါ့ ဒီပါတီကပါတီဝင် တထောင်ရှိရင် တထောင်လုံးအချက်အလက်ပေးရတယ်။ တောင်းပြီးတော့မှ အဲလူတွေကို စပေါ့ချက်ပေါ့လေ။ (spot check ပေါ့) ဒီပါတီဝင်အဖြစ်စာရင်းပြတာ ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းမယ်ဆိုတာထိပါလုပ်ပါတယ်။ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်လုပ်တာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိပါတီက UEC နဲ့ Inline ဖြစ်နေရင် အဲပါတီကိုလှုသူကပြဿနာမရှိပေမယ့် UEC နဲ့ Inline မဖြစ်ရင် အဲပါတီကိုလှုထားတဲ့ သူတွေကလက်ရှိအစိုးရနဲ့ လက်ရှိ UEC ရဲ့ မျက်မုန်းကျိုးခံရမယ့် သဘောဘဲ။ "
နေပြည်တော် ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်ထဲက ဥတ္တရခရိုင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးနဲ့ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးတို့မှာ အသီးသီးစစ်ဆေးသွားမယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အကြောင်းကြားထားပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ ပါတီဝင်ကြေးနဲ့ လစဉ်ကြေး၊ ပါတီကိုလှူဒါန်းတဲ့ ငွေကြေးနဲ့ ပစ္စည်းစာရင်း၊ ပါတီပိုင်စီးပွားရေးက ရတဲ့ အကျိုးအမြတ်၊ ပါတီရန်ပုံငွေနဲ့ ငွေသုံးစာရင်း၊ ပါတီကဝယ်ယူထားတဲ့ ပစ္စည်းစာရင်း၊ ပါတီစည်းရုံးရေးအသုံးစားရိတ်၊ ကိုယ်စားလှယ် လောင်းတစ်ယောက်စီအတွက် သုံးစွဲထားတဲ့ စာရင်း စတာတွေကို ဘဏ္ဍရေးနဲ့ အခွန် ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးတို့ကအထိ စစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပြောပါတယ်။
" ကျနော်အမြင်ကတော့လေ အကုန်လုံးကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သိချင်တယ်။ ပါတီဝင်ငွေရတဲ့ လမ်းကြောင်းကဘာတွေကဝင်ငွေရနေသလဲ။ ပါတီတွေရဲ့ အားနည်းချက်ဒါတွေကိုသိ ချင်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ အားနည်းချက်တွေအကုန်သိရပြီဆိုရင် ဒီအပေါ်ကိုင်ထားပြီးမှဒီပါတီကို သူတို့လိုသလိုကစားလို့ရတာပေါ့လေ။ ဖျက်သိမ်းမယ်ဆိုလဲဖျက်သိမ်းလို့ရတယ်။ တခုခုကစားလို့ရတာပေါ့။ အဲလိုမျိုးနိုင်ကွက်ကိုကိုင်လို့ရအောင်လုပ်တယ်လို့ ဒါမျိုးမြင်တယ်။ နိုင်ငံရေးလက်တွံ့သွားအောင် ဒါမျိုးပေါ့လေ။"
နောက်ထပ်ပါတီတွေကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့စစ်ဆေးမယ်။ ဘယ်တော့စစ်ဆေးမယ် တွေ့ရှိလာတာကို ထုတ်ပြန်မလားဆိုတာအပြင် စစ်ဆေးမှုဟာ ဘယ်လောက် အဂတိကင်းမလဲ တွေ့ရှိချက်တွေမှာ ဥပဒေအရမညီတာရှိရင် ဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲဆိုတာကိုတော့ ကော်မရှင်ဘက်ကထုတ်ပြန်ပြောဆို ထားခြင်းမရှိပါဘူး။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ပါတီအင်အား ၊ ငွေစာရင်း ၊ ပစ္စည်းစာရင်းများစစ်ဆေးမှုခံဖို့ ခေါ်ယူတဲ့အတွက် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ၊ ဗဟိုအတွင်းရေးမှူးတို့နှင့်အတူကိုယ်တိုင်သွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးသန်းဌေးက သူ့ရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့အတူ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အခုလို နိုင်ငံရေးပါတီတွေအေပါ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က လူသိရှင်ကြား စစ်ဆေးတာက ဆယ်နှစ်ကျော်အတွင်း ပထမဆုံး အကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေတွေအရ အခုလိုစစ်ဆေးပိုင်ခွင့်ရှိပေမယ့်လို့ အရင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွေက စစ်ဆေးခဲ့တာမရှိပါခဲ့ဘူး။
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD က စိုင်းကျော်ညွှန့်ကတော့ စစ်ဆေးမှုနဲ့ပတ်သတ်လို့ ပါတီဘက်က တရားဝင် စဉ်းစားတိုင်ပင်ပြောဆိုထားတာမရှိသေးတာမို့ ဒီအပေါ်ဘာမှတ်ချက်မှမပေးပါ ဘူး။ ကိုဗစ်ကာလ ပါတီရုံးတွေပိတ်ထားရတဲ့အပြင်ပါတီတွင်း ကိုဗစ်ကူးစက်သူတွေရှိသလို ကျန်းမာ ရေး အဓိကလုပ်ဆောင်နေရချိန်မို့ ဒီကာလအတွင်းစစ်ဆေးမှုက ပါတီတွေအတွက် အခက်ဖြစ်နေတယ် လို့ဆိုပါတယ်။
"သူတို့ဘာကြောင့်စစ်လဲဆိုတာတော့မသိဘူးပေါ့။ ကျနော်လည်းဒီပါတီရောက်ထဲ ကဒီလိုစစ်တယ်ဆေးတယ်လို့တခါမှမကြားဘူးဘူးဗျ. အရင် UEC ၂ဆက်ပေါ့ဗျာ။ ဦးသိန်းစိန်သမ္မတလက်ထက်ကော NLD လက်ထက်ကောပေါ့လေ။ အဲ ၂ခုလုံးဘာမှတော့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ စစ်တာပြုတာတခါမှမကြားဘူးဘူး။ အခုမှဆိုတော့နည်းနည်းတော့ထူးဆန်းတာပေါ့ဗျာ။ တခုတော့ရှိတာ ပေါ့ဗျာ။ ငွေစာရင်းကလုပ်ထားပေမယ့် ခုချက်ချင်းချုပ်ဖို့ကခက်တယ်ဗျ. ကျနော်တို့ပါတီမှာလည်းဌာနချုပ်ရုံးကအစ ပိတ်ထားတာလေ။ ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီး ကျနော်တို့ဥက္ကဌ မိသားစု ဝင်တွေ ၄၊ ၅ယောက်လောက်ဆုံးတယ်။ ဝန်းထဲမှာဘဲ ပါတီဌာနချုပ်ဖွင့်ထားတာတော့ သိပ်အဆင်မပြေ ဘူး။ အဲဒါတွေခုလုပ်ဖို့ကျတော့ ရုံးအဖွဲ့မှုးဆိုသူကိုယ်တိုင်လဲဖြစ်နေတာလေ။ အဲလိုဆိုတော့ကျနော်တို့ အခက်အခဲရှိတယ်။"
လက်ရှိစစ်ဆေးခံနေရတဲ့ပါတီတွေထဲမှာကော တည်ဆဲ တရားဝင်ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ ၉၃ ခုမှာပါ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဟာ စစ်တပ်ကို ထောက်ခံတဲ့ ပါတီဖြစ်ပါတယ်။ ပါတီပိုင်ပစ္စည်းတွေ၊ ပါတီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ အများဆုံးရှိနေတဲ့ ပါတီတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ စစ်ဆေးမှုခံနေရတဲ့ အမျိုးသားနိုင်ငံရေး ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (DNP) ဟာ ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်က သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဟောင်း ဦးစိုးမောင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူထားတဲ့ပါတီဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသားညီညွတ်သော ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (NUD) ကိုတော့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ NLD ပါတီဝင်ဟောင်း မအူပင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခဲ့သူ ဦးစိန်ဝင်းက တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ UBP ကတော့ နဝတလက်ထက်က ဗိုလ်ချုပ်တဦးဖြစ်တဲ့ သူရဦးရွေမန်းတည်ထောင်ထားတဲ့ပါတီတခုဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရထားတဲ့ NLD ပါတီက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကို ဖမ်းဆီးထားသလို တချို့ကို အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ တရားစွဲထားပါတယ်။
နိုငျငံရေးပါတီတှရေဲ့ ဘဏ်ဍာရေး၊ ပိုငျဆိုငျမှု၊ လူအငျအား နဲ့ပတျသတျလို့ UEC စဈဆေး
ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ UEC က နပွေညျတျောအခွစေိုကျ နိုငျငံရေးပါတီတှကေို ငှကွေေးနဲ့ပိုငျဆိုငျမှုပစ်စညျးတှနေဲ့ ပါတီအငျအား တှနေဲ့ပတျသတျ လို့ စဈဆေးမှု တှစေတငျပွုလုပျနပေါတယျ။ ပွညျထောငျစု ကွံ့ခိုငျရေးနဲ့ ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီ USDP ပါတီ၊ ပွညျထောငျစုကောငျးကြိုးဆောငျပါတီ UBP တို့အပါအဝငျ နိုငျငံရေးပါတီတခြို့ စဈဆေးခံနရေတဲ့အကွောငျး ရနျကုနျကလာတဲ့သတငျးကို မဆုမှနျ ကတငျပွပါမယျ။
တပျမတျောအရာရှိဟောငျးတှနေဲ့ အဓိကဖှဲ့စညျးထားတဲ့ ပွညျထောငျစု ကွံ့ခိုငျရေးနဲ့ ဖှံ့ဖွိုးရေး USDP ပါတီ၊ သူရဦးရှမေနျးတညျထောငျထားတဲ့ ပွညျထောငျစုကောငျးကြိုးဆောငျ UBP ပါတီ၊ အမြိုးသားညီညှတျသော ဒီမိုကရကျတစ်ပါတီ NUD၊ အမြိုးသားနိုငျငံရေး ဒီမိုကရကျတဈပါတီ DNP တို့ကို ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ က စဈဆေးနတောဖွဈပါတယျ။ နိုငျငံရေးပါတီတွရေဲ့ ရနျပုံငှေ၊၊ ငှကွေေးနဲ့ ပစ်စညျးစာရငျးတှကေို စဈဆေးမယျလို့ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျက အသိပေးတဲ့စာထဲမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အသိပေးစာထဲမှာ မပါတဲ့ ပါတီအငျအား တှနေဲ့ပတျသတျလို့ပါ စဈဆေးမှုတှရှေိတယျလို့ စဈဆေးခံရတဲ့ နိုငျငံရေးပါတီတခုရဲ့ အမညျမဖျောလိုသူ ပါတီထိပျပိုငျးတယောကျက ဗှီအိုအကေိုပွောပါတယျ။
"UEC က သူကဦးဆောငျတဲ့နရောမှာနပွေီးတော့ နှိုကျနှိုကျခြှတျခြှတျစဈဖို့အတှကျ ကို ပွညျတဲရေးရယျ ပွညျထောငျစုစာရငျးစဈခြုပျရုံးရယျ၊ ဘဏ်ဍာအခှနျဝနျကွီးဌာနရယျ၊ အဲ ၃ခုကကိုယျစားလှယျချေါစဈတာပါ။ ပါတီရဲ့ပွစောတခုခငျြးဆီအလိုကျစာရငျးစဈခြုပျရုံးကလူတှကေ စဈတယျ။ ဘဏျငှစောရငျးရှိရငျလညျးစီမံဘဏ်ဍာဝနျကွီးဌာနကစဈတယျ။ ပွညျတဲရေးဝနျကွီးဌာနက ပါတီဝငျစာရငျးပေါ့ ဒီပါတီကပါတီဝငျ တထောငျရှိရငျ တထောငျလုံးအခကျြအလကျပေးရတယျ။ တောငျးပွီးတော့မှ အဲလူတှကေို စပေါ့ခကျြပေါ့လေ။ (spot check ပေါ့) ဒီပါတီဝငျအဖွဈစာရငျးပွတာ ဟုတျမဟုတျဆိုတာကို ဆကျသှယျစုံစမျးမယျဆိုတာထိပါလုပျပါတယျ။ နှိုကျနှိုကျခြှတျခြှတျလုပျတာမြိုး ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိပါတီက UEC နဲ့ Inline ဖွဈနရေငျ အဲပါတီကိုလှုသူကပွဿနာမရှိပမေယျ့ UEC နဲ့ Inline မဖွဈရငျ အဲပါတီကိုလှုထားတဲ့ သူတှကေလကျရှိအစိုးရနဲ့ လကျရှိ UEC ရဲ့ မကျြမုနျးကြိုးခံရမယျ့ သဘောဘဲ။ "
နပွေညျတျော ဥတ်တရသီရိမွို့နယျထဲက ဥတ်တရခရိုငျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲရုံးနဲ့ ပွညျထောငျစုနယျမွေ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲရုံးတို့မှာ အသီးသီးစဈဆေးသှားမယျလို့ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျက အကွောငျးကွားထားပါတယျ။ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျက နိုငျငံရေးပါတီတှရေဲ့ ပါတီဝငျကွေးနဲ့ လစဉျကွေး၊ ပါတီကိုလှူဒါနျးတဲ့ ငှကွေေးနဲ့ ပစ်စညျးစာရငျး၊ ပါတီပိုငျစီးပှားရေးက ရတဲ့ အကြိုးအမွတျ၊ ပါတီရနျပုံငှနေဲ့ ငှသေုံးစာရငျး၊ ပါတီကဝယျယူထားတဲ့ ပစ်စညျးစာရငျး၊ ပါတီစညျးရုံးရေးအသုံးစားရိတျ၊ ကိုယျစားလှယျ လောငျးတဈယောကျစီအတှကျ သုံးစှဲထားတဲ့ စာရငျး စတာတှကေို ဘဏ်ဍရေးနဲ့ အခှနျ ဝနျကွီးဌာနနဲ့ စာရငျးစဈခြုပျရုံးတို့ကအထိ စဈဆေးခံရတယျလို့ပွောပါတယျ။
" ကနြျောအမွငျကတော့လေ အကုနျလုံးကိုနှိုကျနှိုကျခြှတျခြှတျသိခငျြတယျ။ ပါတီဝငျငှရေတဲ့ လမျးကွောငျးကဘာတှကေဝငျငှရေနသေလဲ။ ပါတီတှရေဲ့ အားနညျးခကျြဒါတှကေိုသိ ခငျြတယျ။ နောကျပွီးတော့ အားနညျးခကျြတှအေကုနျသိရပွီဆိုရငျ ဒီအပျေါကိုငျထားပွီးမှဒီပါတီကို သူတို့လိုသလိုကစားလို့ရတာပေါ့လေ။ ဖကျြသိမျးမယျဆိုလဲဖကျြသိမျးလို့ရတယျ။ တခုခုကစားလို့ရတာပေါ့။ အဲလိုမြိုးနိုငျကှကျကိုကိုငျလို့ရအောငျလုပျတယျလို့ ဒါမြိုးမွငျတယျ။ နိုငျငံရေးလကျတှံ့သှားအောငျ ဒါမြိုးပေါ့လေ။"
နောကျထပျပါတီတှကေို ဘယျလိုပုံစံနဲ့စဈဆေးမယျ။ ဘယျတော့စဈဆေးမယျ တှရှေိ့လာတာကို ထုတျပွနျမလားဆိုတာအပွငျ စဈဆေးမှုဟာ ဘယျလောကျ အဂတိကငျးမလဲ တှရှေိ့ခကျြတှမှော ဥပဒအေရမညီတာရှိရငျ ဘယျလိုလုပျသှားမလဲဆိုတာကိုတော့ ကျောမရှငျဘကျကထုတျပွနျပွောဆို ထားခွငျးမရှိပါဘူး။ ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျက ပါတီအငျအား ၊ ငှစောရငျး ၊ ပစ်စညျးစာရငျးမြားစဈဆေးမှုခံဖို့ ချေါယူတဲ့အတှကျ အထှထှေအေတှငျးရေးမှူး ၊ ဗဟိုအတှငျးရေးမှူးတို့နှငျ့အတူကိုယျတိုငျသှားရောကျခဲ့တယျလို့ ကွံ့ခိုငျရေးပါတီဥက်ကဋ်ဌဦးသနျးဌေးက သူ့ရဲ့ Facebook လူမှုကှနျယကျပျေါမှာ ဓါတျပုံတှနေဲ့အတူ ဖျောပွထားပါတယျ။
အခုလို နိုငျငံရေးပါတီတှအေပျေါ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျက လူသိရှငျကွား စဈဆေးတာက ဆယျနှဈကြျောအတှငျး ပထမဆုံး အကွိမျဖွဈပါတယျ။ ရှေးကောကျပှဲဆိုငျရာဥပဒတှေအေရ အခုလိုစဈဆေးပိုငျခှငျ့ရှိပမေယျ့လို့ အရငျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျတှကေ စဈဆေးခဲ့တာမရှိပါခဲ့ဘူး။
ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြားဒီမိုကရေစီအဖှဲ့ခြုပျ SNLD က စိုငျးကြျောညှနျ့ကတော့ စဈဆေးမှုနဲ့ပတျသတျလို့ ပါတီဘကျက တရားဝငျ စဉျးစားတိုငျပငျပွောဆိုထားတာမရှိသေးတာမို့ ဒီအပျေါဘာမှတျခကျြမှမပေးပါ ဘူး။ ကိုဗဈကာလ ပါတီရုံးတှပေိတျထားရတဲ့အပွငျပါတီတှငျး ကိုဗဈကူးစကျသူတှရှေိသလို ကနျြးမာ ရေး အဓိကလုပျဆောငျနရေခြိနျမို့ ဒီကာလအတှငျးစဈဆေးမှုက ပါတီတှအေတှကျ အခကျဖွဈနတေယျ လို့ဆိုပါတယျ။
"သူတို့ဘာကွောငျ့စဈလဲဆိုတာတော့မသိဘူးပေါ့။ ကနြျောလညျးဒီပါတီရောကျထဲ ကဒီလိုစဈတယျဆေးတယျလို့တခါမှမကွားဘူးဘူးဗြ. အရငျ UEC ၂ဆကျပေါ့ဗြာ။ ဦးသိနျးစိနျသမ်မတလကျထကျကော NLD လကျထကျကောပေါ့လေ။ အဲ ၂ခုလုံးဘာမှတော့မလုပျခဲ့ဘူး။ စဈတာပွုတာတခါမှမကွားဘူးဘူး။ အခုမှဆိုတော့နညျးနညျးတော့ထူးဆနျးတာပေါ့ဗြာ။ တခုတော့ရှိတာ ပေါ့ဗြာ။ ငှစောရငျးကလုပျထားပမေယျ့ ခုခကျြခငျြးခြုပျဖို့ကခကျတယျဗြ. ကနြျောတို့ပါတီမှာလညျးဌာနခြုပျရုံးကအစ ပိတျထားတာလေ။ ကိုဗဈဖွဈပွီး ကနြျောတို့ဥက်ကဌ မိသားစု ဝငျတှေ ၄၊ ၅ယောကျလောကျဆုံးတယျ။ ဝနျးထဲမှာဘဲ ပါတီဌာနခြုပျဖှငျ့ထားတာတော့ သိပျအဆငျမပွေ ဘူး။ အဲဒါတှခေုလုပျဖို့ကတြော့ ရုံးအဖှဲ့မှုးဆိုသူကိုယျတိုငျလဲဖွဈနတောလေ။ အဲလိုဆိုတော့ကနြျောတို့ အခကျအခဲရှိတယျ။"
လကျရှိစဈဆေးခံနရေတဲ့ပါတီတှထေဲမှာကော တညျဆဲ တရားဝငျရှိနတေဲ့ နိုငျငံရေးပါတီ ၉၃ ခုမှာပါ ကွံ့ခိုငျရေးပါတီဟာ စဈတပျကို ထောကျခံတဲ့ ပါတီဖွဈပါတယျ။ ပါတီပိုငျပစ်စညျးတှေ၊ ပါတီစီးပှားရေးလုပျငနျးတှေ အမြားဆုံးရှိနတေဲ့ ပါတီတခုလညျးဖွဈပါတယျ။
ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျရဲ့ စဈဆေးမှုခံနရေတဲ့ အမြိုးသားနိုငျငံရေး ဒီမိုကရကျတဈပါတီ (DNP) ဟာ ဦးသိနျးစိနျလကျထကျက သမ်မတရုံးဝနျကွီးဟောငျး ဦးစိုးမောငျ ဥက်ကဋ်ဌအဖွဈ တာဝနျယူထားတဲ့ပါတီဖွဈပွီး ၂၀၁၉ ခုနှဈမှာ တညျထောငျခဲ့ပါတယျ။ အမြိုးသားညီညှတျသော ဒီမိုကရကျတဈပါတီ (NUD) ကိုတော့ ၂၀၁၈ ခုနှဈမှာ NLD ပါတီဝငျဟောငျး မအူပငျမွို့နယျ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျဖွဈခဲ့သူ ဦးစိနျဝငျးက တညျထောငျခဲ့ပါတယျ။ ပွညျထောငျစုကောငျးကြိုးဆောငျပါတီ UBP ကတော့ နဝတလကျထကျက ဗိုလျခြုပျတဦးဖွဈတဲ့ သူရဦးရှမေနျးတညျထောငျထားတဲ့ပါတီတခုဖွဈပါတယျ။
၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲမှာ အနိုငျရထားတဲ့ NLD ပါတီက ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျအပါအဝငျ ထိပျပိုငျးခေါငျးဆောငျတှကေို ဖမျးဆီးထားသလို တခြို့ကို အဂတိလိုကျစားမှုနဲ့ တရားစှဲထားပါတယျ။